यो चौतारी कस्को : हार्नेको कि जित्नेको ?
Fri, Jun 22, 2018 | 07:13:57 NST
मदन पौड्याल /उज्यालो ।
ललितपुर, जेठ ३ – ‘गणना के हुँदै छ ? अहिलेसम्म कति आयो ? हाम्रो वडामा कसको मत कति छ ? को अगाडि छ ?’ साँझ सम्म त पक्कै परिणाम आउँछ होला है । यसरी अनुमान गर्ने र जितेपछि सिन्दुर जात्रा गर्नेको भिडभाडले ललितपुरको स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा दिनहुँ चहलपहल हुने गरेको छ । जुन ललितपुर महानगरपालीकाको मतगणना केन्द्र हो । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय भएकाले ललितपुर महानगर भित्र पर्ने २९ वडाका १ सय ३२ केन्द्रको मतपेटिका राखिएको छ ।
केन्द्र बाहिरको चौतारी
मतगणना स्थललाई दुई सडकले जोड्दा अंग्रजी अक्षरको ‘वाई’ आकार देखिन्छ । सडकको छेउमा रहेका पोलभरी लम्बेतान तारैतार छन् । मतगणना भैरहेको भवनको बाहिर निषेधित क्षेत्र भनेर बोर्ड राखिएको छ । गेटमा सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मीको लाइन छ । अनावश्यक भिडभाड नहोस् भनेर भित्र पस्न अनुमती कार्ड चाहिन्छ । त्यसैले पार्टी कार्यकर्ता र समर्थक बाहिरै बस्नुपर्छ । गेट भन्दा बाहिर नजिकै दुई सडकको बिचमा धुपीसल्लाको रुख छ । त्यहि रुखलाई वरिपरीबाट घेरेर चौतारी बनाइएको छ । जुन ठाउँबाट नेपाली कांग्रेसले विजय उत्सव मनाउन सुरु गर्‍यो ।
छिनछिनमा फेरिन्छ विजय उत्सव
वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको पहिलो चरणको चुनाव सकियो । नयाँ दिन जेठ १ गतेको सुरुवात हुँदै गर्दा रातको १२ बजेबाट मतगणना सुरु भयो । मतगणनामा भैरहेको ढिलासुस्तीले पहिलो दिन त पहिलो वडाकै नतिजा आउँदा रात नै पर्‍यो । ललितपुर महानगरको वडा १ बाट वडा अध्यक्षमा विजयी नेपाली कांग्रेसका निर्मल तण्डुकारसहितको टोलीले जेठ २ गते विजय उत्सव मनायो । पहिलो विजय उत्सवमा जितेका उमेद्वार र कांग्रेस समर्थकले पार्टीको रुख चिन्ह अंकित झण्डा, टिर्सट, ध्वजापतका सहित बाजा बजाएर नाचगान गरे । त्यहि चौतारीबाट अविरजात्रा, बाजागाजा सहित विजयउत्सव सुरु भयो । नतिजा आउँदै गर्दा वडा नम्वर २ मा एमालेका राजेश कुमार महर्जन वडा अध्यक्षमा विजयी हुनुभयो । अघिल्लो दिन कांग्रेसले विजयउत्सव मनाएको त्यहि ठाउँमा एमालेका विजयी उमेद्वार र समर्थकले सूर्य अंकित झण्डा, ध्वजापतका सहित बाजा बजाए । नाचगान गरे । यसरी नै तेस्रो दिन चलिरहँदा ८ वडाको मतगणना सकिएको छ । ललितपुर महानगरमा २९ वडा छन् ।
बेला बेलामा वडाको मतपरिणाम आउने क्रम चलिरहेको छ । त्यसैले जसको पक्षमा मतपरिणाम आउँछ चौतारीमा पक्षधर पार्टीका समर्थक र ध्वजापतका देखिन्छन् । चौतारी उही भएपनि बेला बेलामा समर्थक र ध्वजापतका भने फेरीने गरेका छन् ।
घामपानी ओत्ने चौतारी
चर्को घाम लाग्दा पनि धुपीमुनी, फाट्फुट्ट पानी पर्दा पनि धुपीमुनी । घामपानीमा टाउको जोगाउन पनि त्यहि धुपीको चौतारीले काम गरेको छ । त्यतिमात्र होइन यो चौतारी संचारमाध्यममा आउने परिणाम मोवाइलबाट हेर्ने र सुन्ने देखि मतगणना केन्द्र बाहिर टाँस्ने सूचना हेर्ने सबैको जमघटको केन्द्र बनेको छ ।
चाउचाउदेखि पानी बेच्नेको चौतारी
मतगणना सुरु भएदेखि नै मतपरिणाम सुन्न समर्थक र शुभचिन्तकको निक्कै उत्साह छ । मतगणना भैरहेको भवनको सबैभन्दा माथी राखिएको माइकबाट बेला बेला आउने परिणाम सुन्न बाहिर कान थापेर बस्नेको लामै लाइन लाग्छ । आफूले मत दिएका उमेद्वारले जित्ने हुन् की हार्ने हुन् भन्ने समर्थकलाई निक्कै चासो र चिन्ता हुनु स्वभाविक नै हो । चाउचाउ र पानी खाएरै भए पनि परिणाम कुर्ने क्रम अझै पनि जारी छ । चौतारी छेवैमा चाउचाउ देखि पानी बेच्ने पनि उत्तिकै छन् । भोकभोकै मतपरिणाम कुर्नेहरु भोकप्यास मेटाउन टाढा जानुपर्दैन । चौतारी नजिकै बसेर व्यापार गर्नेहरुका लागि तिनै समर्थक ग्राहक बनेका छन् ।
यो जीत कस्को ?
दलका समर्थक, शुभचिन्तकको जमघट त छँदैछ, भित्रबाट मतपरिणाम आएलगत्तै विजयी उमेद्वारलाई फूलमाला, खाँदा ओढाउन समर्थकलाई हतारो हुन्छ । हार्ने उमेद्वारका समर्थक विस्तारै छेउ लाग्छन् । अनि जीत्नेका चुनाव चिन्ह अंकित झण्डा, ध्वजापतका फर्रफराउन थाल्छन् । पार्टीको नारा घन्किन्छ । बाजा बज्छन् । नाचगान सुरु हुन्छ । अनि सुनिन्छ यो जीत कस्को......। मतपरिणाम जो सुकैको पक्षमा आएपनि, विजय उत्सव जसले मनाए पनि यो चौतारी भने चुनावी चहलपहलको केन्द्र नै बनेको छ ।